Archive du 20190408
Polisim-pirenena Tezitra amin’ny fanjakana…
Samy mpitandro filaminana no hanasokajiana ny polisy sy miaramila ary ny zandary. Manana ny satana “fonksionera” kosa ny polisy raha sokajiana ho “militaire” kosa ny miaramila sy ny zandary.
Antananarivo fahatelo Vonon-kandresy ny kandida Feno sy Bodo
Nanakoako ny hira “isika tsy resy fa isika mpandresy” nandritra ny fanolorana ireo kandida depiote atolotry ny TIMK25 eny amin’ny Boriborintany faha-3, dia i Feno Ralambomanana sy Bodo Razafindrazaka miampy ireo mpiray lisitra amin’izy ireo ny sabotsy 6 aprily lasa teo.
Maminiaina Rabenirina « Hafa ihany ny TIM rehefa miasa »
Mampiavaka ny antoko Tiako I Madagasikara hatramin’izay ka hatramin’izao ny fomba fiasany izay manana ny tanjony mazava ary miezaka manatratra haingana izany.
Mpikamban’ny governemanta Mampandany ny kandidan’ny IRD…
Miharihary ny fifangaroan’ny fitantanan-draharaham-panjakana amin’ny fiandaniana politika satria tsikaritra ho miandany amin’ny kandidan’ny IRD (Isika rehetra miaraka amin’I Andry Rajoelina) ny mpikambana ao anaty governemanta sasany.
Mahamaika sy ny laharam-pahamehana Tsy hain’ny fanjakana avahana
Mizotra nilamina ny fiainam-pirenena na dia efa manomboka miseho tsikelikely aza ireo fitarainana maro samihafa.
Praiminisitra Ntsay Christian Haverina haingana ny fandriampahalemana
Nijery ifotony ny olana mianjady amin’ny vahoaka Malagasy, indrindra amin’ny fisian’ny tsy fandriampahalemana, namonjy ny tany Ambatofinandrahana,
Distrikan’Antsalova Misy kandida mampitaraina mponina sahady
Efa mba azo iainana kely ny fandriampahalemana, izany hoe, nihena ny tahan’ny tsy fandriampahalemana raha oharina amin’ny tao anatin’ny 3 volana, hoy ny manampahefana iray ao amin’ny distrikan’Antsalova.
Tantara mitohy PIRATY SA ORIZINALY ?
Mpirahalahy i Balita sy Sandy, Balita kamo mianatra fa mahitahita lalana hanaovana bizina hividianana diplaoma, nety hatrany ny teti-dratsy.
Tsy fanajana ireo Malagasy tany Koweit Tsy ampy ny fandraisan’andraikitry ny fitondrana
Anisan’ny delegasionina nalefa tany Koweit amin’ny maha mpitsirika teo anivon’ny minisiteran’ny asam-bahoaka ny faran’ny taona 2011 aho, hoy i Moussa Soalihy.
Nisavoritaka i Maroantsetra 2 maty, trano 22 may kila forehitra
Sakoroka tanteraka ny tao Maroantsetra ny sabotsy teo. Olona roa no maty, trano 22 may kila forehitra, ary telo no voaroba.
Mpampianatra vao 23 taona Naolana avy eo nesorina ny ainy
Raiki-tapisaka amin’ny Malagasy ankehitriny ny famonoana olona. Mpanaben’ny EPP Mahazoarivo, Ivandrika, tany Farafangana vao 23 taona no hitan’ny mpandalo efa tsy nisy aina intsony, tamin’ny 1 ora ny sabotsy teo. Voaolana izy ity mialoha ny namonoana azy, raha ny fampitam-baovao ofisialin’ny zandarimariam-pirenena.
Ny polisy indray no nanakorontana
Mahamenatra ny zavatra nataon’ny Polisy teto Manakara nandritra ny lalao baolina kitra nihaonan’ny 3FB Vohipeno
Faha-45 taonan’ny STK FJKM Ivontoerana ho an’ny tanora no tsangambato
Nosokafana tamin’ny alalan’ny fotoam-bavaka lehibe teny amin’ny Lapan’ny Kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny sabotsy 6 aprily teo ny fankalazana ny faha-45 taonan’ny Sampana Tanora Kristianina FJKM, izay teo ambany fitarihan’ny filohan’ny FJKM Mpitandrina Irako Andriamahazosoa Ammi.
Fifidianana filoha vaovaon’ny FMF Amin’ny volana septambra 2019
Notontosaina teny amin'ny Hôtel Paon d'Or Ivato Antananarivo tamin’ny sabotsy 6 aprily tontolo andro teo ny AG « Assemblée Générale Extraordinaire » an'ny FMF « Fédération Malagasy de Foot-ball » tantanan’ny CN
Telma Coupe de Madagascar 1/16n-dàlana Saika tafakatra avokoa ireo ekipa vaventy
Nahazoam-bokatra feno ny lalao ampaha-16-ndalan’ny fifaninanana Telma Coupe de Madagascar 2019 natao ny zoma 05 sy sabotsy 06 ary alahady 07 aprily 2019 ka nahitana fa tafavoaka avokoa ireo ekipa vaventy rehetra :
Edito Ny voninahitra no lehibe indrindra !
Tontosa indray iny ny fivoahan’ny filoham-pirenena Malagasy tany andafin’ny riaka andiany fahefatra tao anatin’izay 80 andro latsaka kely nandraisany ny fitondrana izay.
Mpilalao sarimihetsika “Toherinay ny famotehana ity tontolo ity”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny sabotsy teo ireo mpilalao sarimihetsika toy ny mpaka sary, ny mpanao jeux video, ny video klioba mpikambana eo anivon’ny OMACI na ny “Office Malgache du Cinéma”.
Famatsiana rano eto Antananarivo Fanaovana toho-drano no vahaolana
Fihetsiketsehana an-dalambe ny zoma maraina no nanehoan’ny mponin’i Tsiadana ny tsy fahafaliany noho ny tsy fahazoana ranon’ny JIRAMA eny an-toerana.
Gaboraraka amin’ny sarety enti-tanana Hisy faty olona vao handraisana fepetra… ?
Hiandry faty olona mikararana mihitsy ve vao handraisana fepetra fepetra ny tsy fanarahan-dalàna eo amin’ny sehatry ny fifamoivoizana eto Antananarivo.
Mpamonjy voina ao Toamasina Tsy afa-miasa fa tsy misy solika
Tsy afa-manao ny asany araka ny tokony ho izy ny sampana mpamonjy voina na ny “Pompier” ao Toamasina amin’izao noho ny antony tsy miankina amin’izy ireo.
Elaela no tsy nahenoana ny mpanakanto Nantenaina. Mitohy ny mozika, hoy izy, saingy izaho dia artista nisafidy ny ho balizin’ny fiarahamonina.
Madagasikara sy Senegal Hitadiavan’i Lafrantsa tombony ara-toekarena indray…
Tsy hisy akony akory amin’ny toekaren’i Madagasikara ny fandehanan’ny filoha Malagasy tany Sénégal.